Ukuhamba ngebhayisikili kwii-Highlands zaseScotland
Isikhokelo soKhuseleko kwii-Highlands zaseScotland
ebhaliweyo ngomhla 14 Novemba 2014 . Kuthunyelwe kuyo imisebenzi
Ukuhamba ngeebhayisikili kwiiNqilaKukho amaqela amaninzi okuhamba ngebhayisikili kunye namaqela amaninzi ephulo-ntshukumo eScotland nakulo lonke elase-UK. I-CTC ngumzimba owodwa obandakanya zonke iintlobo zokusebenzisa umjikelezo kunye neminqweno.
Iingcebiso zokuhamba ngebhayisikili ezindleleni ezihamba ngokukhuselekileyo Landela i-Highway Code - ungagxobholi izibane ezibomvu kwaye ungagqithisi kwi-pavement ngaphandle kokuba umjikelezo wendlela ekhethiweyo; Kwimimoya emanzi ijonge isivinini njengoko iimpepha zinokuthi zizithobe kwaye kuza kuthatha ixesha elide ukuyeka; Ukuhamba ngokukhawuleza, ngokukhawuleza nangokucacileyo kwinqanaba; Cinga ukugqoka isigqoko; Gcina indlela yakho yokuhamba ngebhayisikili.
Qinisekisa ukuba abatshitshisi banokukubona Uhamba kwindawo apho ungabona kwaye ubonwe; Sebenzisa izibane uze uthathe ukugqokisa izambatho ezibonakalayo okanye ezibonakalayo, ngakumbi kwiidolophu, ebusuku kunye nemimoya embi; Qhagamshelana nabanye abasebenzisi bendlela, ngokukodwa kwiindibano, ngoko uyazi ukuba bakubone; Uphawu ngokucacileyo ngamaxesha onke; Sebenzisa intsimbi yakho - kungekhona bonke abahamba ngeenyawo abanokubona ukuba uqaphele izithuthi ezininzi Iintlankqalazo zenzeka xa umqhubi webhasi ephakathi kwesithuthi esiphendukile. Ungacingi ukuba isithuthi siya phambili ngenxa nje yokuba kungabonakali ukushiya. Njalo ugweme 'ukwenza' nayiphina imoto kule meko - kungcono ukuxhoma emva kokuba isithuthi siphelile. Iingcebiso kubagibeli Ukwenza iindlela ezikhuselekileyo njengoko zikwazi ukuzenza, abaqhubi kufuneka baqaphele nabaqhubi beebhayisikili: Xa ujike umlindi wokushiya kubaqhubi bebhayisikili beza ngasecaleni lakho kwaye ungawasika; Nika abahamba ngeebhayisikili ububanzi obubanzi xa kufikeleleka;
Ebusuku, zidibanise izibane zaso xa usondela kubagibeli; Kwimimoya emanzi, vumela abaqhubi beekhebhu ukuba babe nekamelo elongezelelweyo njengokuba iindawo ezithintekayo zingabonakalisa. Khumbula, abahamba ngeebhayisikile kunye nabaqhubi banelungelo lokusebenzisa kunye nokwabelana ngendawo efanayo. Ukuhlonela bonke abasebenzisi basendleleni kunceda wonke umntu ukuba azuze ekuhambeni kwendlela. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe kwi-https: //www.gov.uk/browse/driving/highway-code
I-Callander ihlala kwicala elingasempumalanga yeLoch Lomond kunye neTrossachs National Park kwaye iyindawo efanelekileyo yokuqala yeLocch's Lochs & Glings Ukufumanisa indawo ekhangelekayo yeentlabathi ezisentshonalanga kwi-West Highland Way. Iintaba ezinqabileyo, iintlambo ezizinzile kunye nokuqhuma imifudlana ihlanganisana ukukuvuza ngendawo ekhethileyo neyatshintshayo xa uhamba ngeekhilomitha ezili-96 ukusuka eMilngavie (i-Glasgow) ukuya e Fort Fort, uhlinzeka ngeBhede kunye neFesinesi endleleni, ufumanisa i-lochs enokuthula , iinqaba eziphakamileyo ezihamba ngebhayisikili ephuma kwi-Fort William ukuya kwi-Inverness, ehamba ngezinye izinto ezikhuthazayo kakhulu ngemini kunye nokunyamekela ukuvakasha kwabantu kwiindawo ezininzi zaseBheden and Breakfast, ngobusuku baseRinnoch Moor, iKinlochleven nge "Staircase's Devil", uBen I-Nevis ne-Fort William, i-Scottish Outdoor Capital esekuqaleni kweLoch Linnhe.
Ukujikeleza nge-landscape ye-lochs kunye ne-glens eyenza iLoch Lomond ne-Trossachs National Park kunye ne-Highland Perthshire. Hlola iScotland njengoko ujikeleza kwi-Park National Cairngorms. Iidolophu eziphakamileyo ezinqamlekileyo, iinqaba zembali, i-Speyside malt whiskeys, iimfazwe zaseYakobe, ukufumana indawo ephuculayo kunye neyokuzonwabisa ngokukhawuleza ukuthatha imibono yelizwe elikufutshane neLoch Ness, thabatha ibhayisikili.
Indawo yeLoch Ness inikezela indawo ephakamileyo kwimimandla eminyeneyo yeCalledonian Canal ekujongeni umngeni, umgama omde, iindlela ezingenasendleleni ezifana neGreat Way. Iindlela ezithulekileyo zelizwe laseStrandnairn kunye necala elingasentla ye-loch zinkulu kubaqhubi beebhayisikili kwaye kukho nemithwalo eninzi yeentaba zeentaba. Indawo yeStathglass inikezela ngamava okuhamba ngeebhayisikili ukuphikisana naphi na kwilizwe. Umgca uhamba phakathi kwe-Beauly noLoch Ness, unikezela ininzi yemizila yehlathi endleleni, ekugqibeleni kwizinto ezintathu eziqaqambileyo ze-Glric of Affric, Cannich neStrathfarrer. Iintlambo ezantsi zeGlen Cannich ziphakama ngokugqithiseleyo ngaphezu kwidolophana yaseCannich, kwaye inqabileyo, kodwa inqabileyo inqabileyo ivumela ukufikelela kwiimitha zamatye, ezidibanisa nokunye ukugibela kwindlela ehamba phambili ye-Mullardoch, iya kukusa kwiLoch Mullardoch, iikhilomitha ezili-9 ezikude.
Lo mbono okhangayo, ujikelezwe yiintaba eziphakamileyo. Ukunyuka kweGlen Cannich ngokuqinisekileyo kunqabile kodwa indlela iyancipha kwaye ibuyele, yonke intaba! I-Glen Affric, ingasondelwa phantse ngeendlela ezisehlathini ezisuka ku-Cannich noTomich, yima emanxwemeni kaLoch Beinn 'Ngaphawuleza, ulwabizo lwamatshini. Iindawo ezisezantsi ezisezantsi zikaTomich kunye neCannich, ukuya kwiCorrimony okanye nangaphezulu kweGlenmoriston, ziindawo ezikude kude nazo zonke, Ziyindlela efanelekileyo yokuhamba entlango. Umzila ovela kwi-Dog Falls ukuya eKnockfin uyamangalisa, njengoko uqala ukuya kuTomich, okanye ukusuka kuLoch Affric kuya kuTomich nge-West Guisachan, i-Cougie ne-Plodda Falls. Ukwandisa ukusuka kuloo ndawo, unokuqhubeka ngaphaya kweentlambo ezantsi ezantsi kwe-Tomich no-Cannich, ukuya kwiCorrimony okanye nangaphezulu kweGlenmoriston, Indawo efanelekileyo yokuhlala kwiBhedi kunye neeRaferensi yilizwe elihambayo I-Inn kunye nokupaka kwendlela kunye nokugcinwa kwemigudu, ezintandathu ukuya ukuqala kwe-strathglass kunye nezinye izinto ezimangalisayo kule ndawo, kakhulu kwaye zizalisa ukutya kwendawo yangokuhlwa, kunye nobhiya kunye nokutya ukugqiba ngokuhlwa ngaphambi kokulala, Ekuseni i-good morning harry breakfast ukugcina uhamba usuku lonke I-Highland Highland Glen Lodge
Ukufumanisa iintaba, izitye kunye nolunxwemeni olumangalisayo lwe-Isle yaseSkye njengoko ujikeleza ubude nobubanzi beziqithi ezinobunzima ezizaliswe zizilwanyana zasendle kunye neziqithi eziqhankqalayo ezihlala zizinzile, kwindawo ezingenanto apho ungakujabulela ukuchitha ixesha elithile elifanelekileyo. Unxweme olunxwemeni lwe-Islay luhle kakhulu uArran, Islay kunye neJura ziindawo ezikhethekileyo zokujikeleza, kwaye unikezela intsingiselo entsha kwiqithi. Iindlela ezijikelezileyo eziqithi zishiywe ziyenze zibe zihle kakhulu, zingalokothi zilibale. Isiqithi esiqhankqalazayo sisona siphumelele kwiindawo ezibukekayo kunye namachweba anokuthabatha kwiindawo ezintsha, unike iBheteli kunye nesidlo sasekuseni ukuze uhambe uhambo oluseleyo.
Lona abathandi be-whisky iphupha lizaliseka, kunye ne-distilleries ezisibhozo eziqithini kunye neendawo ezininzi zokufumana i-pubs kunye neBhede kunye ne-Breakfast yasekuseni! Iidolo eziqithi zonke zihlambulukile kwaye i-whiske iyakudla i-peaty ukunambitha ikakhulukazi emva kwebhayisikili emini, Ukuhamba ngqo ukuya ngasentla kweSkotko kuthetha ukufumana ulwandle olumangalisa.
Ukuhamba nge-Cycling malunga ne-Dunnet Head kuthatha iindawo ezinqabileyo kunye neendawo zokuqhayisa izibheno ezintle kunye neembono eziqingqiweyo ezingabini, Kukho iindawo eziqhelekileyo zendawo zokuhlala kunye nokukhethwa kwamancinci, iintsapho ezihlala kwiBhed & Breakfasts, ihostele kunye neehotele ezinomtsalane othile ngabo. Uyakwamkela ngokufudumele naphi apho uhlala eScotland kwaye uya kufumanisa ukuba ezininzi iindawo zinika ukugcina okukhuselekileyo kwiibhayisikili zakho.
Bhala uhlolo lokuqala!
I-Highlands yaseScottish Day 7 Day Weather Forecast
Isikhokelo soLwazi lweeNkcukacha zeeVil William
I-National Museum yaseScotland (Edinburgh) Isikhokelo
I-Aberdeenshire Guide Guide Information
Isikhokelo soKhenketho seWick Heritage Centre
Isikhokelo sokuhamba kwii-Scottish Highlands
Glen Moray zokuthambisa izixhobo
Indawo yaseGlencoe Skiing
Isikhokelo solwazi soBatyeleli beGlen Urquhart
Bonisa # 5 10 15 20 25 30 50 100 bonke